Single Shot & 2K akpụzi Nsukka na Suppliers - China Single gbara & 2K akpụzi Factory
Ngwunye ogwu bụ akụkụ nke na-enye ihe na nha na ihe plastik n'oge ịkpụzi. Ọ bụ ezie na Ọdịdị nke ịkpụzi nwere ike ịdị iche dabere na ụdị na arụmọrụ nke plastic, udi na Ọdịdị nke plastic ngwaahịa, na ụdị ọgwụ igwe, isi Ọdịdị bụ edo.
Domestic injection ịkpụzi ụlọ ọrụ
Ebu imewe na n'ichepụta nwere njikọ chiri anya plastic nhazi. Ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke nhazi plastik na-adabere n'ọtụtụ dị ukwuu na mmetụta nrụpụta ebu na ịkpụzi akpụzi ebu, ebe nkedo ịkpụ akpụ rọm dabere n'ezi ngwaahịa ngwaahịa plastik.
Elu àgwà ngwa plastic injection ebu
Ngwaọrụ na ngwaahịa anyị na-eji na ndụ kwa ụbọchị, sitere na isi nke akụrụngwa igwe, nkedo dị n'èzí nke igwe ahụ, na obere ịghasa, bọtịnụ na ikpe nke ngwa ngwa ụlọ dị iche iche, ha niile nwere mmekọrịta chiri anya na ịkpụzi.
2K Ugboro abụọ Die akpụzi Plastic Ọgwụ akpụzi
Kkpụzi nkedo 2K: ịkpụzi ngwaahịa na 2 dị iche iche ihe plastik ma ọ bụ agba 2: arụmọrụ na echekwa
Gịnị bụ 2k ọgwụ ebu?
2K Injection Mold, mgbe ufodu mara dika ihe 2 nkedo abuo ma obu 2 agba agba, bu usoro oru ohuru ohuru eji emeputa ihe di egwu site na ihe abuo di iche iche .....
Ntinye 2K na arụ ọrụ na igwe akụrụngwa ịrụ ọrụ injections abụọ n'otu okirikiri.
Ọgwụ na ịkpụzi bụ usoro nke na-eme omenala plastic akụkụ site igba wụrụ awụ plastic ihe onwunwe na elu nsogbu n'ime a metal ebu. Dị ka ụdị plastik ndị ọzọ, mgbe etinyere plastik a wụrụ awụ n'ime ebu ahụ, a na-eme ka ebu ahụ dị jụụ ma meghee iji kpughee akụkụ plastik siri ike.
Ihe na-esonụ bụ isi ise dị mkpa na nhazi nke okpukpu abụọ ogbugba:
1. Ebu nwale na ngwaahịa analysis Tupu ebu imewe, ebu nwale na ngwaahịa analysis bụ a kwesịrị gụnyere ọdịdị, size na udi zere enweghị isi sikwuoro maka abụọ-agba ebu imewe.
2. akpụzi Ọdịdị molddị ebu ihe dị mma abụghị naanị ịkwado ihe ndị ahịa chọrọ, kamakwa chekwaa ụgwọ, belata nsogbu nke nhazi, belata oge nhazi maka ndị ahịa. Iji mezuo nke a, ọ bụghị naanị na anyị ga-agbachasị ihe ndị ahịa chọrọ, kamakwa nwee nghọta zuru oke nke igwe ọgwụ, usoro ihe eji arụ ọrụ, teknụzụ nhazi na ikike ịhazi ụlọ nrụpụta n'onwe ya.
3. Nhọrọ ihe onwunwe Nhọrọ nhọrọ dị ezigbo mkpa maka ịkpụzi okpukpu abụọ. Ọ kwesịrị izute chọrọ nke eyi eguzogide, ike, ike ọgwụgwụ mgbaji ọkpụkpụ arụmọrụ, elu okpomọkụ arụmọrụ, oyi na okpomọkụ ike ọgwụgwụ na-eguzogide, corrosion eguzogide wdg
4. Akụkụ akụkụ na nzukọ Na mgbakwunye na ezi uche imewe na ihe onwunwe nhọrọ, izi ezi nke abụọ-shot ịkpụzi dịkwa oké mkpa na ụdi nhazi na nzukọ. Ya mere, iji hụ na nkenke nhazi nke ebu, elu-nkenke elu nhazi akụrụngwa na ahụmahụ technicians ga-.
5. Nlele akpụzi iji zere igbu oge na nsogbu n'oge mmepụta ihe, ọ dị mkpa iji dozie ma chịkwaa ọnọdụ nhazi dịgasị iche iche mgbe a gbakọtara ebu iji chọta ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide kachasị mma. N'ime usoro ikpe, ọ dị mkpa ịgbaso usoro ọrụ ezi uche dị na ya ma dekọọ usoro ọrụ aka bara uru na usoro nnwale iji kwado nrụpụta ọtụtụ ngwaahịa.
Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Omenala akpụzi, Akpụzi Factory, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Plastic Fanye Nkedo,